Ogaden News Agency (ONA) – Shir Balaadhan Oo Ka Dhacay Xarunta Faraca Barsan Ee Magaalada Garissa
Shir Balaadhan Oo Ka Dhacay Xarunta Faraca Barsan Ee Magaalada Garissa
Maanta oo tariikhdu ahayd 28/9/2014 waxaa magaalada Garissa ee Xarunta Gobolka Waqooyi Bari Kenya lagu qabtay shir balaadhan oo ay xubnaha faraca Barsan iskugu yimadeen, shirkan oo xiisa wayn loo qabay ayaa hall-kii lagu qabtay ay wada yimaadeen xubanaha Faraca Barsan oo intooda badan ku labisanaa calanka bilicda san ee Ogaadeenya.
Shirkan oo uu shir gudoominayey Gudoomiyaha Faraca Barsan Mudane shaafi Cali ayaa waxa uu makarafoonka ku soo dhaweeyay sheikh Xadiis oo ayado quraaan ah ku furay iyo wacyi diiini ah kana hadlay sida uu jihaadka waajib u yahay iyo xubnaha waxa ka saaran kor u qaadista diinta islaamka dhammaan bulshada kuna dhaqmaan .
Gudoomiye Shaafi Cali ayaa waxuu guda galay war bixino aad u qiimo badan oo ah mid dal iyo mid dibada iyo mid ka hadlaysa gudaha Ogaadeenya , oo ay soo diyaariyeen xubnaha faraca , waxaa xubnihii aad uga haqab beeleen war bixinada oo meelo badan taabanaysay .
Waxaa loo sii guda galay shirka qeebihiisa waxaa marti sharaf ahaa oo codka lasiiyay mudane Cabdiraxman Food oo xubnaha si adag oola dardaarmay kana war bixiyay wadankii uu ka yimid ee koonfur Africa iyo xubinka sida laga doonayo ee larabo inuu uga soo dhalaalo kaalinta uu bulshada u hayo.
Maamulka ururka OYSU Faraciisa Barsan ayaa si aad ah ooga hadlayn qaabka OYSU ay u samaysantahay tariikh kooban iyo himilooyinka Ururuka OYSU, waxaana ka hadlay aadna ugu dheeraaday arimahaas iyo arimo kale xoghayaha OYSU ee Garissa Mudane Maxamed Axmed Godane, balan qaadayna in wax badan ay kusoo kordhin doonaa guud ahaan halganka gaar ahaan Faca Barsan.
Xubnihii shirka kasoo qayb galay ayaa waxay aad ooga doodeyn qodobo la hor keenay shirka iyadoo doodii ay si waafi ah uga wada qaby qaateen intii badnayd kasoo qaby galayaashii shirka.
Gabagabadii waxaa lagu soo gaba gabeeyay dhaanto iyo heeso halgameed aad u qiimo badan oo xubnaha dhiigooda aad u dhaqaajisay looguna talagalay sanadguuradii JWXO ee 30 jirsatay.
Shirka maanta ka dhacay magaalada Garissa oo ahaa mid ahmiyadiisa leh ayaa waxa uu kusoo gaba gaboobay jawi aad u wanaagsan.